Bambalwa abantu bacabanga ukuthi akufanele ukwesabe inyoka
Izindaba neNhlangano, Imvelo
Mhlawumbe bambalwa kakhulu abantu bacabanga ukuthi akufanele ukwesabe inyoka. Ngokuvamile uvame ukukhohlwa ukwesaba kwezilwane, ukugxila kuphela. Le ndlela yokuziphatha ngeke isize kakhulu, uma, isibonelo, uhlangana nenyoka ehlathini. Ngenxa yokwesaba kwakho, ungalahlekelwa ikhanda lakho, okuzoholela emiphumeleni enhle kakhulu. Yingakho udinga ukwazi ukuthi awudingi ukwesaba inyoka, into eyinhloko ukukwazi ukusebenzisa ulwazi lwakho lwalesi silwane esingathandeki ngokusebenza ezimweni ezinamandla.
Ngamunye wethu ufisa ukuphuma ngezimpelasonto noma phakathi kwamaholidi endaweni ethile emvelo: endlini yokugibela, ekamu, endaweni yokuzilibazisa. Ngesikhathi esifanayo, akekho ocabanga ukuthi singahlala kanjani sisodwa ngokwemvelo ngezinye izikhathi kuyingozi kakhulu. Uma sikhuluma ukuthi kungani abantu besaba izinyoka, into yokuqala okumele igcizelele yilabo abaningi bethu besaba izilwane ezidliwayo ngenxa yokungazi ukungazi. Vumelanisa, kungamangalisa ukwesaba umuntu ozobe esesaba ngaphansi kwakho uma uhlangana. Kulesi simo ukuthi ezinye izinyoka zivele emkhakheni wokubuka komuntu. Iningi labo liphephe ngokuphelele futhi alilona ushevu, kodwa kusuka komunye uhlobo lomuntu elibaphonsa ekushiseni, futhi ufuna nganoma iyiphi indlela yokukhipha umuntu ongenacala. Kulesi simo, inyoka ingase ihlupheke kakhulu, ngoba umuntu othukile kuqala uzozama ukuyibulala ngokuphepha kwayo. Kodwa kunezimo eziphambene nazo, uma ungenakuthola nenyoka engenazinhlanzi, kodwa nge-reptile esongela impilo yakho ngempela. Futhi kulokho, futhi kwezinye izimo kuyadingeka ukwazi ukuthi kukhona isizathu sokwesaba inyoka, kodwa into esemqoka ukukwazi ukuziphatha ngokuzenzekelayo nayo.
Ekhuluma ngezinto ezesabekayo, ngokuyinhloko bayesaba abantu ngokwabo. Ucabanga ukuthi lokhu kuyamangalisa? Ngokuphelele ngeze, ngoba, njenganoma yiliphi elinye isiphequluli, lithanda ukuthula nokuthula. Futhi ngisho noma ehamba eduze nendoda, kungenxa nje yelukuluku kuphela, kodwa ngokuqinisekile hhayi ngaphandle kwesifiso sokuluma. Kodwa-ke, iningi lethu alinayo ngisho nomqondo omncane kakhulu wokuthi ubheka kanjani, ngakho-ke abaningi bayashesha ukubulala inyoka "enobuhlungu". Iseluleko sethu sokuqala kubafundi: thola ukuthi yiziphi izinyoka ezitholakala endaweni yokuzilibazisa lapho uya khona. Ukwazi ukuthi izinhlobo ezahlukene zezinyoka zibukeka kanjani kuzosiza wonke umuntu.
Ziyini izinyoka zezinyoka eziyesabayo ? Banobuthakathaka futhi banobudlova, ngakho-ke kungcono ukuba ungasondeli kubo. Futhi uma kwenzeka ngenyoka ungahamba ngokuphepha, khona-ke inyoka kufanele igwenywe. Uma sikhuluma ngokumesaba kwalesi sifo, khona-ke sesaba ama-hedgehogs, izinhlobo ezihlukahlukene zomsindo nokudumala komhlaba.
Ama-Hedgehogs kungenzeka esaba izinyoka, cishe, ngoba zidla. Ngokwemvelo, lapho uhlangana nenyoka ehlathini, awukwazi ukugijima ukuze uthole i-hedgehog, kodwa uma unezilwane ezinwabuzelayo kuleli lizwe, yizinhlayiya ezizokusiza ukuba ubhekane nale nhlekelele.
Umsindo uyisici sesibili izinyoka ezesabayo . Abasabekayo bathengiswa cishe noma yisiphi isitolo sezilwane, kodwa ngeke baksebenzele , uma isilwane sakho sisesigabeni se-dacha, ngoba umsindo wokuthi umthengisi uyaphuma ungadlulisa isilwane. Futhi, yebo, indlela ephumelela kunazo zonke idlidliza. Odokotela batusa ukufaka i-helicopter eyenziwe ngokwenziwe e-cottage yakho ehlobo, eyohlale ijikelezwa umoya. Umsindo wayo nokuzamazama komhlaba njalo kuzophazamisa inyoka, futhi ngokushesha uzoshiya insimu yakho. Ngakho, saqaphela ukuthi ukwesaba inyoka kulungile, kodwa ngendlela enemakhono, ungagcina i-cottage yakho ehlobo kulezi zivakashi ezingafuneki.
Amavubi amakhulu aseMoscow naseSiberia
Ukulindela ukuphila kwama-turtles. Age of turtles. Ubukhulu bezingulube
I-Terek River: incazelo nokukhangisa
Savannah: inhlabathi, izimila nezilwane. Ngumuphi umhlabathi okhona phakathi kwe-savanna?
I-jerboa ende: incazelo nenithombe
Euphoria Aegean Resort & Spa 5 * (Turkey / Izmir) - izithombe, amanani, kanye nokubuyekeza zezivakashi ezivela eRussia
Yini-ke nokuthi amathebhu phezu kwabo ukudlala i-instrument?
Izihloko eyenziwe ubhanana ngezandla zabo: okuyinhloko ekilasini, incazelo nemibono ezithakazelisayo
Enjabulweni amaphuzu ikhodi "The Sims 3". "The Sims 3": Amakhodi imali, izingubo, injabulo amaphuzu, izidingo
Ukuhlanganiswa incwadi Ulwazi futhi isampula. Isaziso sokushintshwa imininingwane
Dekabrist Muravev Nikita Mihaylovich: Biography
Bee impova: izakhiwo ewusizo, ukubuyekezwa, izindlela kwesicelo. I impova ewusizo izingane kanye nabantu abadala
Uyini lag, futhi kanjani ukulwa naso?
Russian volleyball player Natalya Safronova: Biography futhi umsebenzi kwezemidlalo
Bheka iphupho nencazo: izinyembezi - kungaba nguyiphi?
Izibani eyenziwe ngetshe
Thola i-apostrophe ekhibhodi